El Clasico: Arimaha Go’aamin Doona Guusha Ciyaarta Barcelona vs. Real Madrid
HomeWararka MaantaEl Clasico: Arimaha Go’aamin Doona Guusha Ciyaarta Barcelona vs. Real Madrid
Sanadihii u dambeeyey – mar kasta oo ay Barcelona la kulanto Real Madrid, waxay ahayd mid leh gacanta sare ciyaarta Clasico. Doorkan xaalku sidaas wuu ka duwan yahay.
Los Blancos lix dhibcood ayay ka saraysa Barcelona, guul ay ka hesho garoonka Camp Nou Sabtiduna, wuxuu sii xoojin doonaa, siina adkayn doontaa awooda gacan ku haynta hogaaminta horyaalka kaas oo ka dhigi doona dhibcaha sagaal nadiif ah.
Zinedine Zidane shirkiisii jaraaid ee ciyaarta ka hor, wuxuu hoosta kaga xariiqay isbedel dhinaca awooda ah oo sanadkan iyo kii hore u dhexeeya.
“Waxay ila tahay in ciyaarta beri (Maanta) ay noqon doonto mid gebi ahaanba ka duwan tii sanadkii hore,”ayuu yidhi, isagoo isbarbar dhigiisa ku salaynaya kulankii Madrid 2-1 ka kaga adkaatay Barcelona eek a dhacday geggida Camp Nou bishii April 2-deedii.
“Waxaanu ahayn, haddii aad ii qirayso, oo meesha la tagnay – iyadoo difaacu naga liito – imikase arimuhu wey ka duwan yihiin sidii.”
Real Madrid’s head coach Zinedine Zidane sits at the bench during a Champions League, Group F soccer match between Real Madrid and Legia Warsaw, at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Tuesday, Oct. 18, 2016. (AP Photo/Daniel Ochoa de Olza)
Waa xaqiiq taasi, in arimuhu sidii ka gedisan yihiin oo aanay u dhawayn – Markaas haddii Real Madrid ay soo afjartay 39 ciyaarood oo aan Barcelona dhinaceeda dhulka la dhigin, imika waa Barca kooxda doonaysa inay sidii si lamid ah u soo gunaanado 32 ciyaarood oo aan guuldaro la dhadhan siin Madrid.
Ciyaartan, oo dhex marta labada kooxood ee dunida ugu awooda badan, waxaan isleeyahay waxaa guusha labada kooxood kala go’aamin doona arimo dhawr ah – kuwaas ama arimahaas aynu isleenahay waa furaha guusha iyo guuldarada labada naadi, ayaynu wax yar ka taataaban doonaa.
Kulanka caanka ku ah magaca ama naanayso – Clasico – Waxaa hormuud u ah xiddigaha dunida ugu khatarsan xaga kubbada cagta, waxaana kamid ah Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez iyo Cristiano Ronaldo kuwaas oo dunidu isku raacsan tahay inay shaki la’aan yihiin afarta ciyaaryahan ee dunida ugu wanaagsan — uma kala fiicnaa sidaynu magacyadooda u soo kala hor marinay.
Labada kooxood ciyaaryahanadooda kalena, kuwaas ayay kudaba safan yihiin oo kama laalaadaan – sida Luka Modric, Marcelo, Andres Iniesta iyo Gerard Pique iyo inta kaleba, kuwaas oo dhamaantood ah awooda iyo mishiinka wax soo saar ee labada dhinac. Waana sababtaas ta keentay in taageerayaasha kubbada cagta ee dunidu indho gaar ah iyo xiiso khaas ah u qabaan daawashada kulanka Clasico, oo ay aalaaba dube iyo musbaar is garaacaya isu noqdaan xiddigo aan kala dhicin, mudo 90 daqiiqo ah.
Real Madrid’s Cristiano Ronaldo, left, scores his sides second goal past Barcelona goalkeeper Claudio Bravo during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid, dubbed ‘el clasico’, at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Saturday, April 2, 2016. (AP Photo/Manu Fernandez)
Laakiin, halka Real Madrid ay guulo iyo damaashaad ku soo naaloonaysay ciyaarihii tan ka horeeyey, Barcelona iyada dhibaato iyo mashaqo ayay dhex mushaaxaysay.
Kooxda lagu naanayso Catalanku, waxay imanayaan ciyaarta iyagoo guuldaro bariiqsatay. Waxaa jihad aka lumisay oo ciyaar fiicnaan ku soo daan daamisay Real Sociedad todobaadkii ina dhaafay, mana ahayn midii ugu horeysay ee dhawaanahan ku habsatay— ee Manchester City iyo Sevilla ayaa labaduba u xoog sheegtay.
Barcelona waxaa guuldaro baday kooxda tabobare Pep Guardiola ee City waxaanay bareejo la galeen labada kooxood ee deriska la ah Real, Hercules iyo Malaga, guulihii ay ka gaadheen Granada iyo Celtic –na lama odhan karo waxay ahaayeen kuwo lahaa awood la tilmaami karo oo muquunin ah.
Pique, iyo ciyaaryahano kale oo kooxda ah, ayaa kamid ah kuwa naftooda cambaaraynta kala xishoon waayay, waana taas ta ay u badan tahay mashaqada kooxdan nasiib xumada loogu saadaalin karo.
Isagoo la hadlayay warfidiyaha – Movistar Plus kadib barbar dhicii Sociedad, Pique, wuxuu yidhi “Suurto gal maaha inaan idin idhaahdo kuwani ma ahayn Barca ciyaaryahanadeedii, laakiin waa inaanu ku faraxsananaa barbar dhaca. Mararka qaar, waxaad guuleysan kartaa ciyaar, adigoo qaab ciyaareedkaagii lumiyey, laakiin marka aadan jihadiiba haysan – werwerkeedu wuu ka sii badan yahay.
Wax alaale wax noo saxnaaba ma jirin maanta. Siday doonaan bay noogu ciyaareen farshaxadooda iyo qaab dhismeedkooda. Waxaanu nasiib ku lahayn inaanu qabtii hore inaanu isyar difaacno qaybtii dambena woxogaa madaxa kor u yara qaadno laakiin waa Ayaan daro iyo masiibo weyn inaanu horyaal sidan u ciyaarno.’’
Kadibna, tabobarayaasha iyo xifradooda safida ciyaaryahanada iyo meelaynta ay ku sameeyaan ayaa noqon doonta tan leh jaan goynta hab dhaca ciyaarta. Labadooduba, waxay soo dhigi doonaan xiddigaha ay isleeyihiin mid kastaa meeshaas ayuu dhagax ka dhigi karaa.
Zidane waa inuu go’aan ka gaadhaa bal midka uu u qaadanayo khadka dhexe ee difaaca raacsan, ma Casemiro mise Isco. Sidoo kale, waxaa laga rabaa inuu Pepe oo aan la hubin diyaar noqoshadiisa ciyaartan xamaasada badan, keeni doono si uu ugu xoojiyo Raphael Varane.
Shaxda uu ku caano maalay ee 4-4-1-1 oo ah midii uu u isticmaalay kulankii – Atletico—waxaa kala dhantaalay dhaaca Bale ku yimid, imika wuxuu Ronaldo saari doonaa baasha bidix halka uu Benzema afka hore ka geyn doono.
Luis Enrique waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo shaxda – 3-4-3 oo uu dhawr jeer wax tar ka arkay, laakiin waxaa la leeyahay waxaa uga wanaagsan shaxda uu isaga laftiisu xiiseeyo aadkana u isticmaalo ee 4-3-3. Shakiga kaliya ee uu qabaana waa – bal in Samuel Umtiti uu diyaar u yahay inuu bedelo booska Javier Mascherano kadib dhaawaca isaga laftiisu la ildaran yahay.
Ciyaaryahanka kaliya ee la hubo inuu u soo kacay waa Andres Iniesta, kaas oo aan bilo garoonada ka soo xaadirin, laakiin ugu dambeyn helay, ogolaanshihii dhakhaatiirta ee kulankan inuu safan karo amrayay Jimcihii shalay. Xidigan La’aantii, saadaasha Barcelona ee natiijo fiicani waxay noqon lahayd mid ceeryaanta ugu xumi hadhayn lahayd.
Ciyaaryahanka ay mudada dheer iska soo barbar safteen, soona wada kifaaxeen, halyeygii kooxda Barcelona ee Xavi Hernandez, isagu dan kama laha qaab xumaanta beryahan haysatay kooxdiisa hore.
Laacibka khadka dhexe, oo hawshii kharash urursiga ahayd ula jooga naadiga reer Qadar ee Al Sadd, wuxuu sheegay in natiijada aan la malayn Karin, iyadoo sababtu tahay kulamada dhex mara Barcelona iyo Madrid waa saadaal inta badan lagu fashilmo oo aan waxba laga sii malayn karin.
“Clasicadu waa ciyaar kuwa kale ka gedisan,” ayuu ku yidhi idaacada – Cadena COPE radio station. “20 dhibcood adigoo ka dambeeya Real Madrid ayaad haddana ciyaar lala yaabo soo bandhigi kartaa, ama ay iyagu soo dhigi karaan, Wax ka khusayn kara in Barcelona mudooyinkii u dambeeyey ciyaar xumayd ma jirto ama lagaga gacan sareeyey Anoeta.”
Si kastoo, ciyaar qurux badan garoonka loola yimaado, hadana waxaan meesha laga saari Karin, in nasiibkuna yahay kala furdaamiye jira oo aan la iska indho saabi karin. Nasiib xummo, tusaale ahaa, tii ka saartay labada laacib ee Real Madrid inay ciyaartan ka qayb noqdaan, Bale iyo Toni Kroos, oo aan dhaawac dartiis u safanayn – laguma sii qiyaas qaadan karo.
Oo haddii uu Lucas Vazquez, oo noqonaya bedelka xiddiga xulka Wales, soo bandhigo qaab ciyaareed ka fiican kii ciyaaryahanka uu bedelay, garankana la gashado Neymar oo baasha bidix ordaya, nasiibkii xumaa wuxuu isku rogi karaa markaaba mid fiican.
Waxaa meesha maraya garsoore: Carlos Clos Gomez. Kaas oo wargeysyada Madrid ka soo baxaa ku tilmaameen ama rumaysan yihiin inuu faa’iido u leeyahay Barcelona hadiiba isagu kala go’aaminayo dhacdooyina ciyaarta, waxaanay qoreen: “Barcelona waligeed guuldaro lamay kulmin ciyaar uu Clos Gomez dhex-dhexaadiye ka yahay, halka Real Madrid ay guuldaraysatay afar ciyaarood oo uu ninkaasi qabtay garsoorka. Taas ma la odhan karaa Barca waxay siinaysaa – rajo caqliyeed iyo dhiiri gallin nafsi ah?”
Jawaabtu waa maya – laakiin waxay xoojinaysaa oo kaliya marka ay wax u dhacaan sida ay warbaahinta qaar u adeegsanayso.
Barcelona’s Lionel Messi, center, runs with the ball between Real Madrid’s Toni Kroos, left and Casemiro during a Spanish La Liga soccer match between Barcelona and Real Madrid, dubbed ‘el clasico’, at the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, Saturday, April 2, 2016. (AP Photo/Emilio Morenatti)
Madrid waxay u aragtaa ciyaartan fursad ay adhaxda kaga jabin karto dhigeed, kagana aar gudan karto guuldaradii 4-0 ka ahayd ee Barcelona baday xili ciyaareedkii ina dhaafay waliba garoonkooda Bernabeu. Guushii 2-1 ka ahayd ee ay ku gaadheen Camp Nou eek a dambeysay ee gayeysiisay niyadii ay ku tageen Finalka Champions League, may noqon bay leeyiihin dhirbaaxo mushkilad iyo carqalad ku keenta reer Catalans. Sidaas darteed ayay aaminsan yihiin in fursadani tahay tii ay dhabarka kaga jabin lahaayeen uguna quus goyn lahaayeen Barcelona iyo rajadeedii hirdanka horyaalka sanadkan, ama kaliya mid ay kaga sii goosan karaan hogaaminta horyaalka sanadkan.